Ra’iisal Wasaaraha Dalka Oo ka qeyb-galay Shir looga hadlayay Arrimaha Soomaaliya:-(Sawiro) – hareerley News
Ra’iisul wasaaraha dalka mudane Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa Washington kaga qayb galay shir ay isugu yimaadeen wadamada Deeq_bixiyayaasha kaas oo looga hadlay horumarka dhaqaalaha Soomaaliya.
Sidoo kale Ra’iisul Kheyre ayaa la filyaa in maalmaha soo socdo uu ka qeyb-galo shirka sannadlaha ah ee Bangiga adduunka iyo hey’adda lacagta adduunka (IMF)
Dowlada FS Oo Caalamka ka dalbatay in laga taageero la-dagaalanka Al-Shabaab
Wasiirka Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska JFS, Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, oo ku hadlaya magaca Madaxwaynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya, kan Raysal Wasaaraha iyo xukuumadda, wuxuu ammaan, bogaadin iyo mahad balaaran u soo jeedinayaa saraakiisha iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya (SNA) Guulaha ay ka soo hooyeen hawlgaladii ugu dambeeyey ee ka dhanka ahaa Al-Shabaab,kuwaas oo isugu […]
In ka badan 600 oo ruux ayaa xabsiga loo taxaabay maanta, ka dib markii ay dibadbaxyo aan fasax loo heysanin ka dhaceen magaalada Moscow ee caasimadda u ah dalka Ruushka. Waxaa sidoo kale lasoo tabiyay qalalaase u dhaxeeya ciidamada booliska iyo mudaharaadeyaasha. Dadka bannaan baxaya ayaa isugu tagay meelo kamid ah caasimadda, iyagoo tallaabadan qaaday […]
Madaxda ONLF Oo Sheegay In Ay Wali Wax Tabanayaan…
Jabhadda Xoreynta Ogaadeeniya ayaa shir jaraa’id oo ay ku qabatay magaalada Addis Ababa, kaga hadashay mowqifka ururka siyaasadihiisa ku aaddan deegaanka Soomaalida iyo dalka Itoobiya. Cabdiraxmaan Mahdi maadey oo ah guddomiyaha xisbiga ay ururka sameysteen ayaa sheegay in isbedelka Itoobiya ka socdo ay ku qanacsan yihiin, balse weli ay wax dhiman yihiin. Nabadda iney qaataan […]